Nagarik Shukrabar - कुहिना र काखीमा कालो दाग छ ?
शनिबार, ०२ कार्तिक २०७६, ०१ : ५०
कुहिना र काखीमा कालो दाग छ ?
शुक्रबार, ०१ पुष २०७३, १२ : २७ | शुक्रवार , Kathmandu
कुहिना र काखीमा हुने कालो दागले धेरैलाई समस्यामा पारिरहेको हुन्छ । तर, त्यस्ता दागलाई सजिलै हटाउन सकिन्छ । नरिवल र कागतीको मद्दतले यस्तो दागलाई हटाउन सकिन्छ । त्यस्का लागि एक चम्चा नरिवल तेलमा एक चम्चा कागतीको रस मिसाउने । त्यस मिश्रणलाई कालो दाग भएको ठाउँमा दल्ने । आधा घण्टापछि मनतातो पानीले पाखाल्ने । नियमित यसो गरेमा केही दिनमै दाग फिका हुँदै जान्छ ।